iimpahla kunye neenkonzo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: iimpahla kunye neenkonzo
Ziziphi iziyobisi ezinxilisayo zibhekwa njengento efanelekileyo? Kutheni
Zeziphi iziselo ezinxilisayo ezithathwa njengezizizilumko? Ngoba? Ubungangamsha besiselo esinxilisayo bugqitywa bubungangamsha besiselo saso. Iicognac, iwayini, i-liqueurs kunye nezinye iziselo ezinxilisayo, ezithi ngexesha lokuveliswa kwazo zidlulise inkqubo yokuguga kwimigqomo ye-oki (ikakhulu i-oki ...
Kuphi ukubeka izinto ezifile?
Zibekwa phi izinto zomfi? Ukuba umfi wayegula sisifo solusu, kuya kufuneka usitshise, ukuba akunjalo, sinike nje amahlwempu neenkedama okanye abantu abadala (abahluphekileyo). Lo iya kuba ngumvuzo wabangasekhoyo. ...
Ungayinqabela njani umthengi isaphulelo?
Indlela yokwala umthengi isaphulelo? Yitsho ukuba ibango leemveliso zakho (iinkonzo) ngoku lenyuke kakhulu kangangokuba ucinga ngokunyusa amaxabiso. Baninzi abantu abazimiseleyo, batsho, kwaye awucengi mntu, kodwa ungowethu ...
Ngaba uthenga kwivenkile "Zonke ezingama-39", njl.
Ndixelele ukuba ndingamnika umama kwi-35 iminyaka?
Ndixelele into oza kuyinika umama iminyaka engama-35? Andazi ukuba sele enantoni umama wakho, kodwa ndiza kudwelisa izinto onokukhetha kuzo kwaye enye inokuthi ikulungele. Ukuqala, iintyatyambo (awathi ...
Indlela yokukhubaza i-5022 yobhaliso kwi-Megaphone?
Ungakukhubaza njani ukubhaliswa kwe-5022 kwiMegafon? Ukurhoxa kubhaliso olungeyomfuneko, thumela i-SMS equlathe iseti yomlinganiswa Hayi okanye Ungabhalisi kwinombolo engu-5022. Ukuba awukwazi ...
Nguwuphi na umqhubi weselula (umnxeba) oqala ngayo ikhowudi kwi-982?
Yeyiphi iselfowuni (iselfowuni) umqhubi onekhowudi eqala ngo-982? Ikhowudi 982 isetyenziswa yi-MTS okanye iTele Tele Systems, umzekelo, kwiPerm Territory, kwingingqi yeKurgan nakwingingqi yeChelyabinsk. Ndanele nam ...
Ngaba ixabiso elincinci lokucoca i-carpet ngokucoca okanye ukuthenga i-carpet entsha?
Ngaba kubiza ixabiso elincinci ukomisa ikhaphethi yakho okanye ukuthenga ikhaphethi entsha? Ukuphoxeka kwindawo yokucoca eyomileyo. Kwangoko kwabonakala ukuba yonke into ilungile kwaye intsha, kwaye kwinyanga kamva onke amabala amadala aphuma kwaye avela ...
Ziziphi iibhothi ezifudumeleyo ezivela kwivakalelwa okanye zivakalelwa?
Zeziphi iibhutsi eziva ukuba zifudumele ukusuka kukuziva okanye ukuziva? UValenki, ukuba andiphazami, zenziwe zaziva. Felt, nangona iphantse yenziwa efanayo, yinto encinci kwaye ithambile. Ye…
Utywala obomileyo xa uhlanjululwa ngamanzi, unako ukusela? Yintoni eya kwenzeka?
Ngaba ungasela utywala obomileyo xa uxutywe ngamanzi? Kuza kwenzeka ntoni, kuya kwenzeka ntoni? Ukwakhiwa kwepetroli eyomileyo yi-hexamethylenetetramine (urotropine) kunye neparafini. Ngaphandle kweli gama, abananto yakwenza notywala. Enamanzi ...
Yintoni i-brilliantite? Idayimane lilitye elixabisekileyo eliye laqhubekeka, o.k.t. cut, yaba ntle, shiny kwaye wangena iringi yakho. Ngaphambi kokusika, yayiyidayimani eyayimbiwa ...
"zonke 38" Lungisa amaxabiso kwivenkile yesiqhelo?
Indlela yokubeka isikhangiso kwiAvito?
Uyibeka njani intengiso ku-Avito? Ukuze ubeke intengiso kwiwebhusayithi yeAvito, kufuneka ubhalise njengomntu okanye inkampani, bonisa igama lakho, idilesi ye-imeyile, uze kunye nokuphinda iphasiwedi. ...
Ungakhetha njani ikota?
Uyikhetha njani ikepusi elungileyo? Xa ukhetha ikepusi, okokuqala, kufuneka unikele ingqalelo kwixesha lonyaka, oko kukuthi, ulithenga ngaliphi ixesha lonyaka, emva koko uthathe isigqibo malunga nomgangatho wezinto ...
Ngaba ndifuna ukusula imvulophu ekukhutsheni umntwana osana?
Ngaba imvulophu esandula ukuzalwa kufuneka ihlanjwe? Zonke izinto ekucwangciswe ukuba zinxitywe umntwana osanda kuzalwa kufuneka zihlanjwe kwaye zi-ayinwe, kuba indoda encinci ichaphazeleka kakhulu kulo naluphi na usulelo nolusu ...
Ixabisa malini i-ultrabook? Nanga amaxabiso ezinto ezisetyenziswayo kubathengi baseNtshona, ngokwe-pcmag. Nangona iphepha libhalwe ngesiNgesi, ulwazi loqwalaselo luya kucaca. Ngokubhekisele kumaxabiso: ...
Ngaba kuyinyaniso ukuba uMgcini weMark uya kuvalwa? Ukuba kunjalo, nini?
Ngaba kuyinyani ukuba iMarike yeGARDENER iya kuvalwa? Ukuba kunjalo, nini? Ewe, imakethi yaseGadini, ngelishwa, ivaliwe. Bafuna ukwakha indawo enkulu yokuthenga kwindawo yentengiso. Ewe kunjalo, ukulwa nabantu abafudukayo ...
Imiyalelo kwiincwadi ze-Quelle neBonprix. Yiyiphi ivenkile ye-intanethi ukukhetha?
Imiyalelo kwiikhathalogu zeQuelle neBonprix. Yeyiphi ivenkile ekwi-intanethi onokuyikhetha? Ewe, ndikucebisa ukuba ungay-odoli naphina - zonke ezi venkile zilibazisekile, amaxabiso abo awamkelekanga apho - ndinako ...
Ingakanani imali yokutshintshela imali kwi-imeyile emva kokuthumela isaziso?
Uya kuhlala ixesha elingakanani kwi-odolo yemali ngeposi emva kokuthumela isaziso? Ngokwazi kwam, uku-odolwa kwemali ngeposi kuya kukulinda inyanga, emva koko imali ibuyiselwe. Kutshanje ...
Yintoni oyifunayo ukuba uyazi xa ufumana imali mboleko?
Yintoni ekufuneka uyazi xa uthatha imali mboleko? Qiniseka ukuba ufunda ikhontrakthi, unobumba ngamnye omncinci. Cacisa amanqaku angacacanga ebhankini kwaye uqiniseke ngokubuza malunga neemeko ezingalindelekanga. Kodwa kuqala, phambi kokuthatha ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,206.